Archlinux 2012.07.15: goodbye onye ochie installer | Site na Linux
Archlinux 2012.07.15: goodbye onye ochie installer
Mgbe Arch ọ bụ distro na-agbapụ aka, ọ na-abata na enyemaka kwa mgbe inwe otu ISO Ọhụrụ na nchịkọta ọhụrụ na mmelite sistemụ gụnyere.
N'oge na-adịghị anya Arch nwere ọtụtụ mgbanwe nke chọrọ ntinye aka nke onye ọrụ iji melite n'enweghị nsogbu. Site na ISO ọhụrụ, agbanweela mgbanwe ndị ahụ na ndabara, yabụ maka ndị nwere ọtụtụ nsogbu, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịwụnye ụdị ọhụrụ a ... nke nwere ụfọdụ akụkọ.
Arch Linux, ihe nkesa nke na-elekwasị anya na KISS na-arụ ụka nke ọma (Mee Ka Ọ Dị Mfe, Onye Iberiibe) echiche ruru 2012.07.15 ụbọchị ole na ole gara aga.
Dabere na ndị mmepe Linux Arch, enwere naanị otu nnukwu mgbanwe na mwepụta a: agaghị agunye AIF (Arch Installation Framework); kama, edeputara ederede di mfe iji kwado usoro ntinye.
Maka ndị na-amaghị, AIF (Arch Installation Framework) bụ menu na-atụ ụjọ na-acha anụnụ anụnụ nke anyị niile maara, menu nke ọjọọ ma ọ bụ enyerela anyị aka ịwụnye Arch Linux ogologo oge na mgbe ọ na-apụ n'anya, anyị na-ahapụ gị naanị nhọrọ iji wụnye Arch Linux site na ụfọdụ "ederede ntinye dị mfe" na nke ahụ ga - atụ ụjọ karịa otu onye ọrụ novice mgbe ị na - achọ ịwụnye Arch Linux na kọmpụta ha.
Ihe onyonyo Arch Linux ISO ọhụrụ a bịanyere aka na sistemụ nkwenye ngwungwu pacman ma a na-atụ aro ka ịlele ya site na faịlụ .sig enwere ike ibudata ozugbo na ibe Arch Linux, tupu ejiri ya iji wụnye nkesa na kọmputa gị, ma si otú a kwere nkwa na ọ dị mma.
Iji nyochaa mbinye aka na Arch Linx, ị nwere ike ime nke a site na ịme iwu ndị a:
pacman-igodo -v .sig
E wepụrụ Arch Installation Framework site na nkesa n'ihi na ọ nweghị onye ga-anọgide na-elekọta ma na-azụlite ya.
Lee enwere nkọwa ndị ọzọ na scripts kwesịrị ịgba ọsọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Archlinux 2012.07.15: goodbye onye ochie installer
Archlinux yiri ka ọ na-alaghachi na mgbọrọgwụ echiche ya dabere na http://www.crux.nu ihe ojoo maka ndi oru ohuru ohuru na ihe gbasara iji ndi oru di elu
Fabian Barrios dijo
N'uche nke m scripts ka mma, M ugbua arụnyere a ọhụrụ version, na otu usoro na ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu …….
Zaghachi Fabian Barrios
Ana m anwale ya ọ bụ ezie na ọ dị m ka ọ dị mfe karịa na onye nrụnye ochie mana hey anyị ga - agbanwe! 🙂
mbanye anataghị ikike uhie dijo
M na-eji arch, maka mmemme, na n'ihi na ọ dịghị distro na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaike nke oge a dị ka arch. Ọ bụ ya.
Aga m asị ndị achịcha achịcha achịcha gị ...
N'oge ezumike ndị a, m na-eche n'echiche ịnwale ụta, enwere m ihe oyiyi ochie na mgbe m mechara nweta eriri ethernet iji tinye ebe dị na ya achọtara m njehie, nke na-agaghị ekwe ka m melite, na m nkụda mmụọ m hapụrụ na amalitere igughari akwukwo ndi ozo rue mgbe m choputara ihe kpatara nke a .. Ebudatara m onyogho a ma ugbua o putara na eriri USB amaliteghi enwetara m njehie syslinux nke na ekwu ihe dika "I can boot kernel" na eziokwu bu na m gbalịrị ihe niile: Ee onye maara ihe kpatara ya. Na wiki ọ na-ekwu na ị ga-eji "pacman -key" nyochaa ihe onyonyo a amaghị m ihe .. mana nsogbu bụ na kọmpụta ọzọ ebe m nwere ohere bụ windo na enweghị m ike ịme ihe ọ bụla T_T n'ihi buut nke zuru ụwa ọnụ dị ka ịwepụ mgbe niile na-agwụ n'otu njehie .. ma o doro anya na njehie na njedebe bụ ụfọdụ "wychis.c3"
Onwe ya, ọ ka mma itinye obere oge na ntinye ma hụ na usoro nkwụsi ike ma ọ bụ obere maka ogologo ma ọ bụ obere oge karịa OS dị ka Win nke, edozi, dozie iji dozie ya, ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụ ịmegharị ya. Ka o sina dị, ihe niile nwere Arch bụ okwu nyocha ntakịrị, n'ihi na ọ bụghị ihe na ọkwa mmemme, mana ọ bụghị nke ụdị "Na-esote, na-esote, na-anabata".
Zaghachi Pablo Andrés Ochoa Botache
Archlinux, o siri ike ịwụnye ma ọ bụ hazie, o nwere ọtụtụ akwụkwọ na wiki, mana iji ya rụọ ọrụ nke ọma na ọ bụ ezigbo ejighi n'aka, ọ nweghị ụlọ ọrụ ga-enwe obi ụtọ ịkwụ onye na-elekọta ya ụgwọ iji mee ka pacman -Syu ma mezigharị ihe ndozi ahụ . N'aka nke ọzọ, ịmata Archlinux apụtaghị na ịmara otu esi elekọta nkesa ndị ọzọ niile bụ aghụghọ, nkesa ọ bụla nwere usoro ngwugwu nke ya na usoro mbido ya.
Comrade, ziga ozi na ndị na - agụ akwụkwọ site na Linux (Echere m na okwu gị ị gụrụ, aha aha gị na-ada m ntị) n'aka m.
Ga-eche ihu ihe ga - eme, ị ma ihe ga - eme. Agaghị m alaghachi azụ n’agbanyeghị isi ike gị n’ihi na enweghị m ike ịme ya. Anabataghị m ebe ahụ.
Anyị ga-esi n'okwu ahụ na anọghị m ebe a, echetara m, ọ dịghị onye dị mkpa na saịtị ahụ ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe ọzọ.
Ugbu a, echere m na obere ga-anabata ndị bidoro iji Gnu / linux.
Tupu ọ dị mfe
Dị ka m, enwebeghị m ịwụnye nkesa netinstall.
Arch = Dependencies, Debian = Na-agbaghara m njehie oge niile na ndị mmadụ na-eme nke ọma n'akụkụ ahụ.
Ntinye ngwa ngwa esighi ike (ya na ntuziaka), dị ka obi ike si kwuo: (ekele) "ọ na-ewe obere oge", a hụrụ m Arch n'anya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ GNU / linux ka ọ na-enye m ihe niile m chọrọ, KISS, pacman bụ egwu …….
Echere m na ọtụtụ mgbanwe na-abịa na nke a adịghị njọ, mana n'ezie site na isoro wiki ihe niile na - adị mfe ma ọ bụrụ na enweghị ọgbakọ ebe ị na - amụtakwa ma nyere aka
Nsogbu nke ntinye Arch bụ na ọ dị ogologo, mana ọ na - enye gị ohere itinye naanị ihe ịchọrọ, nwee ike ị nweta ọtụtụ kọmputa gị.
Mana nke ahụ siri ike bụ akụkọ ifo dị ka nnukwu katidral
Maka gị, ọ dịghị nhịahụ ya mere na ọ dịghị mfe, ama m gị.
Ọ naghị adị gị ka ịmụ ihe, oge.
Fingun Byron dijo
Are bụ onye mmemme, ị maara Linux, ị na-eji ya n'ihi na ị naghị eji Windows,
ị jiri ya maka onye ndezi ederede, ọ masịrị gị ka ewelite nhazi ahụ (
ọ bụ eziokwu Arch bụ onye kachasị mma maka nke ahụ yana amụma ya gbasara ihe
minimalist, ọ bụ ihe naanị ndị mmadụ ga-egbu oge na-anabata ya, ee
ọrụ ga-echeta karịa ga-arịọ maka a ọzọ echichi
- omenala nke na - ahapụ gị ịnwe sistemụ ngwa ngwa ozugbo e mechara nwụnye,
maka ihe obu obu ntinye ka m na adabaghi ​​ya? Achọghị m ịma otú mgbagwoju anya
ihe ọ bụla nwụnye, ihe dị mkpa bụ ịrụ ọrụ nke ọma bụ nwụnye)
Zaghachi Fingun Byron
Javier Rivera kwuru dijo
Nye m, ọ dịghị mfe n'ihi na ọ bụghị anyị niile nwere njikọ ịntanetị na nke ahụ bụ otu n'ime ntụpọ nke archlinux, kama distros dị ka Linux mint, ubuntu, mandriva ga-ebute ụzọ n'ihi na ejiri ma ọ bụ na-enweghị ịntanetị enwere m ngwa ịmalite ịmalite ime ọrụ m.
Zaghachi Javier Rivera
Otu ihe ahụ ka m gwara onye ọzọ.
Echere m na Arch ka dị mfe karịa ihe ha gwara anyị, (ọkachasị ubuntosos).
Arch abụghị ihe siri ike, ọ na-ewe oge karịa oge.
Onye ọ bụla chọrọ ihe nwere onye ọlụlụ na-esiri ya ike, ọ dịkwaghị.
Ma ma echeghị m na ọ siri ike
@ google-2dbe1768f380e06c632e48dac8f555db, ahụghị m ihe ọjọọ ọ bụla na ọ bụrụ ọgba aghara maka naanị ndị ọrụ nwere ahụmahụ. Agbanyeghị, ọ dịworị, tupu ndị ọrụ ọhụụ amalite ịtụ ụjọ mgbe etinyere ha, ugbu a ha ga-eme ya tupu.
Ọnye na -bụ Alexander Turcios? dijo
Dị nnọọ ka i dere, nke a ga - eme ka ndị ọhụrụ ahụ pụọ na linux, ọ ga - abụ distro maka ndị ọrụ nwere ahụmahụ.
Zaghachi Alexander Turcios
Enwere m mmasị n'ịwụnye ihe na-amasị m nke kachasị amasị m na ihe niile bụ nke sitere na Disemba 200, ndị ọzọ ha wepụtara mgbe e mesịrị enwere m mmasị na obere.
Otu bụ na ọ na-eji ya na nke ọzọ
GNOME na-ewepụta Softwarelọ Ọrụ Software nke ya